दसैंको दक्षिणा बचत गर्नुहोस,नागरिक लगानी कोषबाट पेन्सनदेखि ऋणसम्म सुविधा पाइन्छ - Setopati
जेष्ठ १२,२०७७ / ०९ : ०७
दसैंको दक्षिणा बचत गर्नुहोस,नागरिक लगानी कोषबाट पेन्सनदेखि ऋणसम्म सुविधा पाइन्छ
आज बिजया दशमी। अर्थात् दसैंको टिका। टिका लगाएर मान्यजनले दक्षिणा दिने चलन रहेको छ
हाम्रो समाजमा अहिले पनि दसैंको आशिर्वादसँगै दक्षिणा पनि दिने चलन छ। त्यसैले दक्षिणा बटुल्ने योजना छ भने अनुमान पनि भयो होला यो वर्ष कति दक्षिणा जम्मा होला? २ हजार ४ हजार वा ६ हजार?
त्यो दक्षिणा के गर्ने योजना छ? यदि तपाईंको दसैंमा दक्षिणा मात्रै ६ हजार भन्दा बढी हुन्छ भने आउनुहोस् एउटा योजनामा सहभागी बनौं, जुन भविष्यका लागि निकै लाभदायक हुनसक्छ।
त्यो पैसा जम्मा गरेर तपाईंले भविष्यमा पेन्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। वा हरेक वर्ष ६ हजारका दरले बचत गर्दै जाँदा तपाईंले ५० लाखसम्म ऋण तथा १ लाख सम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।
प्राय सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि संस्थागत संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले बचत गर्दै आइरहेको नागरिक लगानी कोषले अहिले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
असोज २ गते सार्वजनिक गरेको कोषको नागरिक बचत वृद्धि कार्यक्रमले भने सर्वसाधारणलाई पनि समेट्ने छ। अब सर्वसाधारणले पनि कोषको सदस्य भएर पैसा बचत गर्न सक्नेछन्। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आएको छैन।
‘कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यविधि नबनेकाले अहिलेनै कार्यान्वयनमा भने आएको छैन,’ कोषका सुचना अधिकारी उद्धव सिलवालले भने, ‘दसैंसम्ममा कार्यविधि बनाउने र दसैंपछि लगत्तै कार्यन्वयमा जाने योजना छ।’
कोषको यो कार्यक्रममा मासिक वा वार्षिक रुपमा गरिने सानो सानो बचतले पनि भविष्यमा ठूलो प्रतिफल दिन सक्छ।
मासिक ५ सय जम्मा गर्नुपर्ने कोषको सर्त छ। तर यो हरेक महिना जम्मा गर्नु पर्दैन । यदि पैसा नभएको बेलामा यो तीन/तीन महिनामा वा छ/छ महिना वा वर्षमा एक पटक तिरे पनि हुन्छ । मासिक तिर्नेले महिनाको ५ सय रुपैयाँ तिर्छन् भने ६ महिनामा तिर्नेले ३ हजार र वर्षमा एकै पटक तिर्नेले ६ हजार जम्मा गर्नुपर्छ ।
पैसा कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ ।
कोषले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले खाता खोल्नुपर्ने बताएको छ ।
‘हामीले २८ वटा बैंकसँग सहकार्य गरेर जुनसुकै वाणिज्य बैंकको जुनसुकै शाखा बाट पनि खाता खोल्न सकिने व्यवस्था बनाउन लागेका छौं,’ सिलवालले भने, ‘बैंकमा रहेको कोषको फर्म भरेर बैंकले नै कोषमा पठाउछ । फर्म कोषमा आएपछि सबैलाई कोषको कार्ड दिन्छौं । सोही कार्डमा भएको नम्बरको आधारमा पछि रकम जम्मा गर्न मिल्छ ।’
वर्षमा एक पटक दशै आउछ लगत्तै तिहार तथा छठ पनि आउछ । कोषमा पनि वर्षमा एक पटक पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसैले हरेक दशैंमा पाएको दक्षिणा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ भनिएको हो । दशैं बाहेक पनि आफूसँग पैसा भएको जुनसुकै बेलामा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । तर त्यो रकम कम्तीमा ५ सय हुनुपर्छ र बढीमा जति पनि राख्न सकिने कोषले जनाएको छ ।
कोषमा यसरी जम्मा गरिएको पैसा पहिलो ५ वर्षसम्म भने निकाल्न मिल्दैन । निकाल्न त परको कुरा पाँच वर्षसम्म कोषमा पैसा जम्मा गर्दिन भनेर भाग्न पनि पाइँदैन । एक पटक कोषमा जम्मा गरेपछि उसले पाँच वर्ष बचत गर्नै पर्ने कोषले जनाएको छ ।
तर पाँच वर्ष पछि तपाईलाई अल्छि लागेर पैसा ननिकाल्नुहोला नि !
त्यसपछि कोषबाट अन्य सुविधा लिन सकिन्छ । जस्तै, ऋण ।
कोषमा पाँच वर्षसम्म नियमीत रुपमा पैसा जम्मा गरेपछि जम्मा संकलन भएको रकमको ८० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकमसम्म कर्जा दिने बताएको छ । यस्तो कर्जाको र बचत बीचको व्याजको अन्तर १.५ प्रतिशत हुने कोषले जनाएको छ ।
यदि हरेक महिनामा पाँच सयको दरले नियमीत बचत गर्न थालेको १५ वर्ष भएमा भने कोषले पेन्सन समेत दिने बताएको छ । तर पेन्सन कस्तो कति रुपैयाँको हुने भन्ने निणर्य भने कार्यविधिले नै निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
पेन्सन लिन नचाहाने बचत कर्ताले १५ वर्षपछि बचतको प्रतिफलसहित एकमुस्ठ रकम निकाल्न पनि मिल्छ । त्यसका लागि कोषको खाता खोल्ने फर्ममानै प्रस्ट पार्नुपर्छ, आफू भविष्यमा पेन्सन सुविधा लिने वा एकमुस्ट पैसा नै लिने ।
‘कोषको फर्ममानै पेनसन वा पैसा छान्न पाइन्छ,’ सिलवालले बताए ।
यसरी एकमुस्ठ पैसा लिंदा कोषले जम्मा भएको पैसा, त्यसको ब्याज र रकम लगानी गरेको प्रतिफल पनि थपिने छ ।
तर बचतकर्ताको बचत गर्दा गर्दै मृत्यु भएमा भने उसले इच्छाएको व्याक्तिले एकमुस्ठ रकम पाउने छ । अन्य सुविधा भने नपाउने कोषले प्रस्ट पारेको छ ।
बचतकर्ताले पेन्सका लागि फर्म भरेको भए इच्छाइएको व्याक्तिले पेन्सननै पाउने व्यावस्था गर्ने कोषको तयारी छ ।
कोषले दिने सुविधा यति मात्रै होइन । कोषमा खाता खोलेपछि कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमाको पनि सुविधा दिएको छ । २० लाख सम्मको शैक्षिक कर्जा, तथा २० लाखको सरल कर्जा पनि पनि दिनेछ त्यो पनि १० प्रतिशत व्याजमा ।
यस बाहेक ४० लाखसम्म आवास कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ९.५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । कोषलले सबै प्रकारका कर्जा दिंदा बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिने बताएको छ।
योसँगै कार्यक्रममा सहभागीहरुले औषधी उपचार बीमा, मृत्यु संस्कार खर्च र सुत्केरी खर्चजस्ता सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरु पनि पाउने छन्।
विभिन्न अस्पतालसँगको सहकार्यमा उपचार गर्दा छुट गर्ने सुविधा दिने व्यावस्था पनि गर्ने कोषले जनाएको छ । अहिले सम्म कोषमा रकम जम्मा गर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्मको लागि कर छुट दिने गरेको थियो । यसरी बचत गरेको रकमबाट भने कर छुट हुने नहुने भने अहिले नै प्रस्ट नभएको कोषलले जनाएको छ।
कोषका अनुसार यस विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा कोषमा जम्मा गरेको कर पनि तिर्नु पर्दैन ।
यो कार्यक्रमबाट दशैको बेला पाउने सामान्य दक्षिणा मात्रै पनि जोगाउन सके वा वर्षमा ६ हजार मात्रै बचत गर्दा पनि भविष्यमा त्यसको प्रतिफल राम्रो पाइन्छ । त्यसैले विचार गरौं अहिलेको सानो सानो बचतले भविष्यलाई फाइदा हुन सक्छ ।